Kaafi News » Danjiraha Qaramada Midoobay Ee Soomaalida Oo La Kulmaya Madaxweyne Muuse Biixi
Danjiraha Qaramada Midoobay Ee Soomaalida Oo La Kulmaya Madaxweyne Muuse Biixi
Posted on July 25, 2019 in TOP NEWS, WARAR by admin.
Hareysa(kaafinews):-Danjire James Swan oo ah ergayga uu xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u magacaabay arrimaha Soomaalida iyo wefti uu hoggaaminayo, ayaa la filayaa inuu socdaalkiisii u horeeyay ku yimaado caasimadda Somaliland ee Hargeysa.
Danjire Swan ayaa la filayaa inuu Hargeysa kula kulmo Madaxweynaha JSL Muuse Biixi Cabdi iyo masuuliyiin kale. Tan iyo markii laba bilood ka hor la magacaabay ergaygan waa socdaalkii u horeeyay ee uu ku yimaado Somaliland.
Diblomaasigan Maraykanka ah ayaa ka hor xilkan Qaramada Midoobay wuxuu ahaa safiirka Maraykanka u qaabilsan Soomaalida, waxaanu wakhtigaas ahaa sarkaal xogogaal u ah arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya, isagoo dhawr goor la kulmay Madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Siilaanyo.
Wargeyska Geeska Afrika ayaa dib ugu noqday kaydka uu ka hayo ergaygan socdaalka ku imanaya Hargeysa oo hore si waafi ah uga hadlay qaddiyadda Somaliland, wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya iyo amuuro kale oo gobalka ku saabsan.
Wuxuu diblomaasigan Maraykanka ahi intaas raaciyay ” Sidaas daraadeed dawlada Maraykanku waxay rabtaa inay sii wado inay kala shaqayso dadka Somaliland iyo maamulka dhinacyada gargaarka bini’aadanimo, dib u dhiska iyo horumarinta iyo dhinacyada xidhiidhka dawladnimo ee aanu wadaagno, isla markaasna mawqifka dawlada Maraykanku waa mid barbar socda la’na mawqif ah qaramada midoobay, midawga Afrika iyo dawladaha la jaarka ah Somaliya.”